दाँतमा प्वाल परेको वा किरा लागेको छ ? यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस् - सिधा मिडिया
२९ आश्विन २०७८, शुक्रबार ०९:०६ मा प्रकाशित
किन हुन्छ क्याभिटी ? दाँतमा प्वाल पर्नुलाई नै चिकित्सकीय भाषामा क्याभिटी भनिन्छ । मुखमा उत्पन्न हुने एसिडका कारण दाँतको इनामेल खिइन्छ र दाँतमा क्याविटी हुने गर्छ । क्याभिटीको समस्या मुखमा रहेको ब्याक्टेरियाको कारण हुन्छ ।
ल्वाङ : क्याभिटी लगायत दाँत सम्बन्धि कुनै पनि समस्यामा ल्वाङको प्रयोग प्रभावकारी मानिन्छ । ल्वाङमा एन्टी इन्फ्लेमेन्टरी, एनाल्जेसिक तथा एन्टी व्याक्टेरियल तत्व भएका कारण यसले दाँतको दुखाई कम गर्नुका साथै दाँतमा क्याभिटी फैलिन दिदैन।
नुन : एन्टीसेप्टिक र एन्टीबायोटिक गुणका कारण नुनको प्रयोग क्याभिटीको उपचारमा हुने गर्छ । नुनको प्रयोगले दाँतको दुखाई तथा दाँत सुन्निने समस्या कम गर्नुका साथै कुनै पनि किसिमका संक्रमण तथा मुखमा व्याक्टेरियाको वृद्धि हुनबाट रोक्छ ।
लसुन : एन्टी व्याक्टेरियलको साथ एन्टीबायोटिक गुणका कारण लसुनको प्रयोग क्याभिटीमा प्रभावकारी मानिन्छ। लसुनले दाँत टुक्रने तथा क्याभिटीको समस्या कम गर्न मद्दत गर्नुका साथै दाँतको दुखाईबाट समेत राहत दिलाउँछ । र, दाँतलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ ।
जेठी मधु (मुलेठी) : अमेरिकन केमिकल सोसाइटीको जर्नल अफ नेचुरल प्रोडक्टमा प्रकाशित एक लेख अनुसार जेठी मधुमा रहेको एन्टी व्याक्टेरियल तत्वले दाँतमा क्याभिटीको विकास हुन दिदैन । साथै, दाँतमा काई लाग्न नदिएर दाँतलाई स्वस्थ राख्दछ।
बेसार : आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिले बेसारलाई क्याभिटीबाट हुने दाँतको दुखाई कम गर्नका लागि उपयोग गर्दछ । बेसारमा रहेको एन्टी व्याक्टेरियल तथा एन्टी इन्फ्लामेन्टरी गुणले गिजालाई स्वस्थ राख्नुका साथै व्याक्टेरियाको संक्रमणका कारण दाँत झर्ने समस्याबाट रोक्दछ ।
नीम : निमको पात पनि क्याभिटीको उपचारमा प्रभावकारी तथा लोकप्रिय मानिन्छ । यसमा रहेको एन्टी व्याक्टेरियल गुण व्याक्टेरियाले दाँतमा क्याभिटी हुन दिदैन । र, भएको छ भने पनि उक्त समस्यालाई हटाउन मद्दत गर्दछ ।
अमला : अमला जस्ता जडिबुटी पनि क्याभिटीको उपचारमा महत्वपूर्ण मानिन्छ। अमलामा रहेको एन्टीअक्सिडेन्ट तत्व तथा भिटामिन सीका कारण यसले व्याक्टेरिया तथा रोगको संक्रमणसित लड्न मद्दत गर्छ ।
साथै, सासको दुर्गन्ध हटाउन तथा मुख सफा गर्न पनि अमलाको सेवन प्रभावकारी मानिन्छ। अमलाई सिंगै वा आधा गिलास पानीमा आधा चम्चा अमलाको रस मिसाएर पनि यसको सेवन नियमित गर्न सकिन्छ ।